I-Crystal Remoter Control Roller Shutter Door China Manufacturer
Incazelo:Amasango wokuvala ama-Commercial Roller,I-Shopping Mall ihamba ngesango,Izindawo zokuthengisa ezithengiswayo
Home > Imikhiqizo > I-Crystal Roller Shutter Door > I-Crystal Remoter Control Roller Shutter Door
I-Crystal Remoter Control Roller Shutter Door
I-Model No.: HF-JC20
I-Crystal High Speed ​​Rolling Up Door - Ukusebenzisa amaphrofayili e-aluminium ngensimbi yokuxhumeka komnyango, isakhiwo sezinhlangothi ezimbili, umklamo okhethekile, ungene emshini wesango.
Isisekelo senziwe nge-aluminium alloy design ekhethekile, okulula ukumelana nokushisa komzimba nokuhleleka.
Thulisa ithrekhi yenziwe nge-aluminium alloy, i-double-slot design, impahla eyimungulu ingafakwa ngaphakathi kwesakhiwo, futhi idale indawo enokuthula.
Uhlelo lokulawula: 24V DC, ukusebenza okuyisimungulu, okuphephile nokuthembekile, okuhlala isikhathi eside nokuphila okude. Uma kwenzeka izithiyo, iminyango iqhuma noma imise ngokuzenzakalelayo ngesikhathi sokuvula nokuvala.
- Okungenakunqotshwa - Okufakwe ku-aluminium exruded, isimo sezulu esinamandla nesibonakaliso sokugqwala
Amasango wokuvala ama-Commercial Roller I-Shopping Mall ihamba ngesango Izindawo zokuthengisa ezithengiswayo Amapulangwe okuvala i-PVC Roller Amasango okuphepha we-Security Roller Amasango okuvala kagesi Isango lokuvala isikrini se-Greyle Roller Isango lokuvala elingaphandle le-Exterior